Isjiidka waa version gaaban movie oo dhan. Waxay yeelan karaan cod badan narrating ama sharxaya filimka. Sida caadiga ah trailer ah qaataa qiyaastii 2-3 daqiiqo, sababtoo ah waxay la mid yihiin gaaban xayaysiis videos. Waxaan qaadan doonaa eegno sida ay u abuuraan isjiidka isticmaalaya shaqada ee la heli karo ee iMovie.
Qeybta 1: Sida loo abuuro iMovie isjiidka
Qeybta 2: Top isjiidka 5 iMovie
Sida loo abuuro isjiidka iMovie
Burcad iMovie oo guji badhanka abuuro.
Doorashada A ee isjiidka in ay diyaar la soo bandhigi doonaa shaashadda, dooro mid ka mid ah sida aad jeceshahay.
Riix tab dulmar ku darto macluumaad sida horyaalka, waqtiga iyo taariikhda filimka.
Hoos trailer kasta, waxaa jira entry ah xubin ka tirsan ee kabka.
Click on Double trailer ah in ay doorasho.
Marka aad ku dhameysatay kaalinta galaya faahfaahinta trailer ah, guji icon ku qabsato rukun ee hoose bidix si ay u sameeyaan hagaajin kasta.
iMovie si toos ah u badbaadiyay isjiidka sida aad shaqeeyaan iyaga on.
Marka la dhammeystiro, si xor ah u wadaagno trailer iyada oo channel aad jeceshahay on YouTube.
Top 5 isjiidka iMovie
Haddii aad hareerahaaga fiiri internet-ka, waxaad ka heli doontaa ugu rarataan culaysyo ee isjiidka sameeyey isticmaalaya iMovie, qaar ka mid ah way wanaagsan yihiin, kuwa kale ma ahan wax fiican. Markaas yar in ay yihiin cabsi badan yihiin waxaa. Waxaan isku daynay ugu fiican si aan idin keeni qaar ka mid ah isjiidka dhab ahaantii eegto aad ugu dhow in ay isjiidka movie xirfad leh, oo dhan mahad muujinta trailer cajiib ah oo iMovie. Isjiidka Kuwan waxaa laga soo sameeyey inta badan ay amateurs isticmaalaya iPhone ama iPad.
Iska hubi oo aad awoodi kartid in aad aragto nooca iMovie kara waxay bixisaa in aad marka ay timaado in la abuuro video isjiidka ah oo kuu gaar ah u noqon. Waxaad ka dibna si fudud aad videos dunida wadaagi karo.
Xanaaqay, trailer cabsi la dhigtay iMovie u iPhone, tani waa tusaale cajiib ah oo ah sida awooda badan iMovie qalab yahay. Waxaad arki kartaa in kastoo ay tahay trailer lagu sameeyo hiwaayadda u ah, waxa ku dhawaad ​​u eg yahay heshiis dhab ah. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan qaar ka mid ah saamaynta muuqaal ah fanaaniinta iyo sidoo wejiyadooduna ee trailer ku soo bedelato aadanaha tirokoobyada ghostly.
Guji link si aad u baadhid - http://www.youtube.com/watch?v=P7IbzIyYPnc
Tani waxay muujinaysaa mid ka mid labo caadiga ah iyo bidhaaminaya ay u safrayaan jaceyl. Theme trailer iMovie ayaa loo isticmaalaa waa badnaayeen, soo bandhigidda safarka ku faraxsan lamaanahan in this video wada qaatay; trailer laftiisa ayaa la sameeyey iyadoo la isticmaalayo isku-dar ah clips iyo sawiro. Guud ahaan, waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan iMovie isjiidka wixii aad aragteen oo waayadan dambe.
Guji link si aad u baadhid - https://www.youtube.com/watch?v=nlKQx_s_Mys
Cat Aan si caadi ah
Trailer A funny dhigay bisad xayawaanka, Kanu waa waa daawado, si fudud u xaqiiqda ah in ay tahay si ay indhuhu. Mawduucan isticmaalo waa mid aad u khafiif ah oo lagu qoslo, in kastoo aannu xoog u rumaysan in clips ah ayaa laga yaabaa iftiin fiican Abuuraha reer trailer waxa uu qabtay shaqo aad u wanaagsan oo la subtitles dabcan iyo in kani mid ka mid ah iMovie isjiidka aannu u jecel ee waqtiga oo dhan.
Guji link si aad u baadhid - https://www.youtube.com/watch?v=Vf6vRRVcmdc
Jidka Great in ay toogtaan trailer theme geesi-, wuxuu eegaa this iMovie trailer oo aad ku xidhan in lagu dhaco jacayl la fikradda ah samaynta mid aad u sidoo kale. Theme iMovie fiican ayaa loo isticmaalaa samaynta trailer kanu inuu runtii ka dhigi lahaa aad aaminsan tahay in ay jiraan wax ka dib markii trailer ah, aad u ogaato, sida waxa la sameeyay filim dhab ah ama wax.
Guji link si aad u baadhid - https://www.youtube.com/watch?v=RGKNzCf_vmQ
Trailer oo macmal ah oo ku saabsan dulucda basaas, taas oo mid ka mid kaliya oo ka mid si ay u muujiyaan sida ay awood u iMovie waa haddii aad rabto in aad wax ka isjiidka nabarrada inkastoo video ay si gaar ah waxaa loogu talagalay is yara funny dhaco laakiin waxaad weli u arki karaan wax badan ee ka iman karta isjiidka iMovie la kaliya this video mid.
Guji link si aad u baadhid - https://www.youtube.com/watch?v=wiEsmYRFB6U
Top 20 saamaynta iMovie aad u
> Resource > iMovie > Sida loo abuuro iMovie isjiidka on Mac